एकाङ्की : उज्यालो - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
← कथा : प्रेम पत्र
कथा : छाडेको फूल →
मूल पात्र परिचय :
समृद्ध : (दुई युवक टायलले छाएको घरका पिँढीमा ,पछाडि भिर्ने झोला पिँढीमा राख्दै ) साह्रै थाकियो यार ! यो घरमा त चाइँचुइँ केही छैन । यो मसानजस्तो घरबाट केही आश नगरे हुन्छ,हिँड अन्तै जाऊँ ।
दिवाकर :(पिँढीमा बस्दै) तिमी पनि साइको कुरा गर्छौ यार ! गाउँ नै मसानजस्तो भएपछि घर मसानजस्तो हुँदैन त ? राम्रो पढेलेखेका धनीहरू अमेरिका, जापान, अस्टेलिया रामै्र देशमा गएका छन् । मध्यम वर्गकाहरू कतार, साउदी, कोरिया भारत आदि देशमा छन् । हामीजस्ता न ढोकाका न डोकाकाहरू….।
वीणा : आच्या, महादेव त कान्छा हुनुहुन्छ होइन र ? के अचम्म कान्छाका छोरा पनि …..।
समृद्ध : (दिवाकरलाई चिमोट्दै सानो स्वरमा) हैन साइको, पेटभित्र मुसा दगुरिरहेको छ भोक लागेको छैन भन्छौ । खुरुक्क खानाको चाँजोपाँजो मिलाऊ नत्र……।
दिवाकर : (ठूलो स्वरमा) गर्न त एम.ए. पास गरेका छौं नि आमा तर……..।
दिवाकर : (ठूलो स्वरमा) हुन्छ आमा हुन्छ, भोक मीठो कि भोजन मीठो भन्छन् …..।
समृद्ध : (रिसाउँदै सानो स्वरमा) अब तिमीले मुख खोल्यौ भने म निको मान्दिनँ । जे जवाफ दिनु छ म नै जवाफ दिन्छु बैरीलाई …….।
दिवाकर : (वीणालाई तलदेखि माथिसम्म हेर्दै) यार, मान्छे काँडामा टेकेर फूलको खोजीमा हिँड्छन् । हामी मूला भने यस्ता सुन्दर फूलहरूलाई टेक्छौँ …. ।
वीणा : (पाकिरहेको गुन्द्रुकमा चौलानी हाल्दै) सुनेकै हुँ पापीहरूले बाग्मती, विष्णुमतीलाई पनि दुर्गन्ध पारेको कुरा । अब त गाउँमा पनि शुद्ध खान पाइदैन बाबु हो । सकिनसकी भैँसी पालेकी छु । यस्सो सघाउन पल्लाघरे जीवेकी छोरी आउँछे । उसलाई स्कुल पढ्न पुग्ने खर्च जुटाइदिएकी छु , त्यसैले सेतो देख्न पाइएको छ । भोक नै नभएपछि फेरि मिष्टाङको के काम? पटक्कै भोक लाग्दैनँ । बाबुहरू पाल्नु भएकोले निभाएको आगो पनि बालेँ । आफूलाई कृष्णे र कृष्णेको बाबुलाई सम्झियो भने लागेको भोक पनि हराउँछ । रेडियोमा उनीहरूको झल्को दिने गीत बजेकोले मन त्यसै भाँडिएको थियो । टुप्लुक्क बाबुहरू पाल्नुभयो । दुवैको झल्को केही भए पनि मेटियो ।
समृद्ध : (ठूलो स्वरमा) त्यस्तो विचल्ली त कैयौँको भयो नि आमा ! अनि तपाईँको कथा नि?
हुकुमबहादुर : (ढोका धकेलेर भित्र पसी खुकुरी नचाउँदै अरू चारछ जना पनि हँसिया बन्चरो खुकुरी लिएर पस्दै) उज्यालो होइन भाउजू, मोराहरूले घोर अँध्यारो पार्थे घर । तपाईंको बुद्धिमा त कीरा नै लागेको छ । आफूमाथि त्यत्रो बाण लाग्दा पनि… । सुमितले सुत्ने बेलामा यी डाँकाहरूलाई यहाँ देखेको कुरा नगरेको भए…. ।
समृद्ध: (समृद्ध र दिवाकर थरथर काँप्छन् । समृद्ध डराएको स्वरमा) हामी अर्खवाङ्गे काजीका नातिहरू….।
वीणा 🙁 हुकुमबहादुरलाई जुठै हातले धकेल्दै) हो…हो…. यिनीहरू डाँका नै हुन् । सर्प नै बनेर डस्न आएका थिए । मेरो भान्सामा आएपछि यिनीहरूभित्रको विष सबैसबै झरिसकेको थियो । भोलि यिनीहरू यहाँबाट निस्किँदा केवल उज्यालो लिएर निस्किन्थे । यिनीहरूभित्र मैले ज्वालामुखी देखेकी छु । यी बूढा आँखाहरूले यति त भेउ पाउछ बाबु हो । त्यसैले बिन्ती सबै निस्किनोस् । म सधैँ मरेकीलाई फरि मृतुको के डर ?
वीणा : (ठूलो स्वरमा) म खुस्केको होइनँ । तपार्इंहरू खुस्कनु भएको हो । यिनीहरू उज्याला चिराग हुन् मेरा लागि बुझ्नुभयो ? केवल उज्याला चिराग… ।
चन्द्रलक्ष्मी 🙁 ढोकामा पुगेर फर्किंदै ) दिदी, ‘भीर खोज्ने गोरुलाई राम’ मात्र भन्न सकिन्छ । काँध थाप्न सकिँदैन । यही उज्याला चिरागले डढाएर खाक बनाउलान् याद राख्नुहोस् ।
वीणा 🙁 सबै रिसाउदै जान्छन् । वीण ढोका लगाएर समृद्ध र दिवाकरतिर हेर्दै ) भाँडा बाटामा राखेर चुठ । गिलासको पानी मलाई देओ । (रिसाउँदै ) सहयोग गर्न पर्यो भने चार बित्ताअगाडि सर्दैनन् । घर भाड्न पर्यो भने कोसौँकोस नागेर आउँछन् चुतियाहरू ! यी पापीहरूले घर जग्गा खाएको भए मेरो यो दुर्गति हुन्थ्यो र ? म बूढासँगै जांदी हुँ । सित्तैँ घरनग्गा खान आँ मुख गरेर बसेका थिए । अहिले सबै भत्किसकेपछि दया देखाएझैँ गर्छन् ।
दिवाकर :(पानी दिँदै) आमा ! बिन्ती हामीलाई माफ गर्नुहोस् । वास्तवमा हामी……।
वीणा : (मूल ओछ्यानमा बसेर दुवैलाई बस्न इसारा गर्छिन् । दुवै बस्छन् । दिवाकरको हात मुसार्दै ) तिमीहरूभित्र आत्मविश्वास छैन र भड्केका छौ । आत्मबल हुँदो हो त …..।
समृद्ध : (वीणाको काँधमा मुन्टो राखेर रुन्चे स्वरमा) कति आत्मविश्वास आमा ? हामी दुवैले थाहा पाएदेखि नै अर्काको जुठो भाँडा माझेर आधा रातसम्म जागा भएर पढ्थ्यौ र पढिरहेका छौँ । त्यसरी पढेर एम.ए.पास ग¥यौँ । मालिकहरूले काम गरेर खानू भनी घरबाट निकालेपछि हामी गुँड भत्किएका बचेराजस्तै भयौँ । हामीलाई कसले काम दिने ? धेरै ठाउँमा काम खोज्दै भौतारियौँ । मालिकहरूले दिएको पैसा सकिएर भोकभोकै प¥यौ । तीनचार रात साथीहरूकोमा सुत्यौँ । सबै मतलबका यार त हुन हाम्रो यथार्थ थाहापाएपछि वास्तै गर्न छोडे । त्यसपछि सडकका पेटीमा पनि सुत्यौँ । पेट भर्नको लागि अरूले नचिनुन् भनेर अनुहारमा रुमाल बानेर,क्याप लगाएर पलास्टिक टिप्दै हिँड्न थाल्यौँ । कतिले त चोर डाँकाहरूले मोटर चोरे, भाँडा चोरे भनेर पिट्न पनि आए । संसार यस्तै हो भन्ने सोचेर सबैका गालीहरू चुपचाप सह्यौँ ।
वीणा : (हाँस्दै ) मैले कहाँ उनीहरूलाई हीरा बनाएको हो र चन्द्रे ! मैले त केवल नालीमा परेको हीरालाई निकालीदिएकी मात्र हुँ । गाउँमा अलि शान्ति भएकोले र पढेलेखेकाहरू कोही सहर,कोही विदेश गएकाले उनीहरूले मौका पाए । खैर राम्रै गरे । आठदश महिनामा त यत्रो प्रगति गरेका छन् । अबस्य राम्रै गर्छन् । म तिमीहरूलाई पाल्छु बाबु हो भनेकीे थिएँ । कहाँ मैले उनीहरूलाई पाल्नु उनीहरूले पो उल्टै मलाई पाले । रोग भनेको त मनको पीर पो रहेछ । अहिले त उनीहरूले समयमै खानदिने हँस्सीमज्जा गर्ने गरेकाले संसार भुलेकी छु । यो पनि थाहा छ । यी सबै दुईदिनको घामछाया मात्र हुन् र पनि…..।
समृद्ध : (उठ्दै)सबैको सपना साकार गर्न पाए हुन्थ्यो ।
वीणा :(हाँस्दै) सबै साकार हुन्छ बाबु ! भगवान्ले तँ आँट म पुर्याउँछु भन्छन् रे ।
दिवाकर : ( हातमा बोकेको कपी पिँढीमा राखेर वीणालाई अँगालो मार्दै ) यस्ती सिङ्गै धर्तीजत्रो छाती भएकी आमा पाएर नै हामी अँध्यारा मान्छे उज्याला भएका हौँ । नत्र……..।
वीणा : मणि मणि नै हुन्छ चन्द्रे ! मैले त केही गरेकै होइन । खैर, सज्जनले थोरै गुन गरे पनि धेरै देख्छ । दुष्टले प्राण नै आहुति गरे पनि देख्दैन । (घरभित्र पस्दै ) ल चन्द्रे,भित्रबाट छोराहरूलाई खाजा ल्याइदिन्छु ।
This entry was posted in एकाङ्की and tagged Lalita Doshi. Bookmark the permalink.